Izidakamizwa "Mebendazole" ( "Vermoxum", "Vormin") ubhekwa kuyaphumelela anthelmintics. Umuthi itholakala ifomu tablet futhi okwesikhashana. isithako zayo asebenzayo - mebendazole.
Umuthi has a ezibanzi spectrum umsebenzi anthelmintic. Umuthi ngempumelelo kakhulu trihotsefaleze futhi enterobioze. Imithi amabhlogo synthesis tubulin yeselula e izimpethu, kuphazamisa ukusebenza microtubules cytoplasmic iphinde ivimbele ukusetshenziswa ne-glucose kuvimbela ukwakheka ATP.
Ngemva kokuthola lezi nomuthi amuncwa umzimba ngezinga elincane. Umuthi has a bioavailability iphansana, ngenxa eliphezulu umzimba kokuqala solubility ngokwanele ongaphakeme. Nomuthi "Mebendazole" (Umhlahlandlela uqukethe ulwazi ezifana) excreted endleni yabantu abanaleli cishe ngokuphelele.
Umuthi ezinqunyiwe ukuqeda cestodes, nematodes. Izimpawu I-reception yayo zihlanganisa hookworm, ascariasis, Enterobiasis, trichinosis, trichocephalosis. Izidakamizwa "mebendazole" imfundo manual uncoma ukuthi usebenzise ne echinococcosis, taeniasis, strongyloidiasis. I nomuthi inikezwa futhi kuxutshwe Ukuhlasela.
Izidakamizwa "mebendazole" yokusetshenziswa ayikuvumeli ukusetshenziswa in iziyaluyalu ezinzima kwesibindi, hypersensitivity kuso. Akunconyelwe imithi nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-iminyaka emibili.
Lapho ebonisa indlela lo izidakamizwa ku isizinda omkhulu ayehlasela helminthic nokususwa ngokwanele okusheshayo amagciwane kungenzeka (kwezinye izimo), ubuhlungu besisu (lezivakashi), ikhanda, isifo sohudo. Ngezinye izikhathi kukhona ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza. ukwelashwa isikhathi eside ne ebulilini nomuthi echinococcosis kwezinye izimo waphawula neutropenia. Okungenzeka ohlangothini ukusabela futhi eosinophilia, futhi igazi. Kwezinye izimo, iziguli ngesikhatsi ukwelashwa nge izidakamizwa bavele komzimba (ukuqubuka, angioedema, ukulunywa noma isifuba). Akuvamile waphawula nezinwele, kanye cylindruria, hematuria.
Iziguli abaneminyaka engama ayishumi enterobioze imithi "mebendazole" imfundo manual uncoma inani eziyikhulu angu. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi ukhombe angu amabili nanhlanu noma amashumi amahlanu. Ukulungiswa kulokhu esithathwayo esisodwa. Ngo ukusetshenziswa yesibili kwengozi yokutheleleka Kwenziwa futhi nomuthi - ngemva kwamasonto amabili noma amane, ngesikhathi umthamo ofanayo.
Lapho ankilostomidoze, ascariasis, trihotsefaleze izingane kanye nabantu abadala izidakamizwa ezinqunyiwe kabili ngelanga ngamakesita ayikhulu angu (ekuseni nakusihlwa). Ukwelashwa Kwenziwa izinsuku ezintathu.
Lapho Ukuhlasela okuxubile, strongyloidiasis, taeniasis Kunconywa umthamo abadala - angu angamakhulu amabili kabili ngosuku. Izingane Kunconywa kabili ngosuku eziyikhulu angu. Ukwelapha kwaqhubeka izinsuku ezintathu.
Ngezinye trichinosis izidakamizwa "mebendazole" imfundo manual incoma usebenzisa uhlelo ezilandelayo: ezinsukwini ezintathu zokuqala - kathathu ngosuku 200 noma 400 angu, kusukela okwesine Ngosuku lweshumi - kathathu ngosuku 400-500 angu.
Lapho echinococcosis iqondiswa kabili ngelanga 500 angu zomuthi (ezinsukwini ezintathu zokuqala). Phakathi ezinsukwini ezintathu ezizayo, ukuvama isicelo senyukela izikhathi 3 (efanayo Isikali ngakwesokunxele). Ngemva kwalokho, watusa ukuba umthamo zonke izinsuku we-25 noma ezingu-30 angu amakhilogramu esisindo, amathathu noma amane Ukweqiwa ngayinye.
Nge ukweqisa izidakamizwa kwezimali waphawula ukuhlanza, ukukhishwa isisu kanye nesicanucanu. Kukhona futhi amajaqamba lesisu. Kulezi zimo i-lavage esiswini usebenzisa ikhambi potassium permanganate kuyinto pink okhanyayo. Ivunyelwe ukusebenzisa carbon isebenze.
Zibheke ekusebenziseni izidakamizwa "mebendazole" phakathi nokukhulelwa kanye lactation Uchwepheshe inquma. Phakathi yonke inkambo yokwelapha kufanele kube ngokucophelela inhlanzeko. Kunconywa ukuba ibhekane ukwelashwa wonke amalungu omkhaya.
Ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa "mebendazole" kudingeka kudokotela.
Ukulungiselela Hondroprotektivnoe "Artroglikan" ngoba izinja
"EntseVir": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Kusho futhi amaphilisi sohudo
Ubani umbazi: ukufaneleka nokudangala komsebenzi
Lamadolobha amakhulu waseRussia. Map of Russia - emadolobheni amakhulu
Kungani iPhone ayixhunyiwe-Wi-Fi? Xilonga uphinde uxazulule izinkinga
Yini igama ezivamile futhi uwedwa?
Perforation emathunjini: izimpawu, izimbangela, izindlela ukuxilongwa kanye therapy
Loader "Amkodor 333V": ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe
Ithoni Cream "Givenchy": Izibuyekezo
Kuyini margin futhi ziyini?